Madaxweynaha Soomaaliya oo Wadahadal la qaatay ururka Ahlusuna Wajeeca | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo Wadahadal la qaatay ururka Ahlusuna Wajeeca
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wadahadal la qaatay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Ahlusuna waljameeca oo ka arrimiya qeybo kamid ah deegaanada gobollada dhexe.
Madaxa ururka Ahlusuna waljameeca Sheekh Maxamed Shaakir ayaa shalay dib ugu noqday degmada Dhuusamareeb ,isagoona sheegay in wadahadalo uu lasoo qaatay Madaxweynaha Soomaaliya.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in is afgarad uu ku dhamaaday kulamadii uu la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxa uu sheegay iney kawada hadleen arrimo la xiriira hagaajinta xiriirka maamulka gobollada dhexe ee Ahlusuna waljameeca iyo dowladda dhexe kaasoo xumaa muddooyinkii ugu dambeeyey.
Madaxweyne Farmaajo danta caamka ah iyo mid-gaar ahba waan ka wada-hadalney,waxaan isla soo qaadnay dhismaha iyo tayeeynta ciidamo Soomaaliyeed oo awood leh si looga adkaado al-Shabaab”. ayuu yiri Sheekh Shaakir.
Maamulka Ahlusuna waljameeca ayaa ka arrimaha inta badan gobollada dhexe iyagoona gacanta ku haha degmada muhiimka ah ee Dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka Galmudug walow ay Ahlusuna diidan tahay maamulkaas.